एउटी महिलालाई झुटो सावित गराउन पुरै गाउँ उल्टियो – Dainik Sangalo
एउटी महिलालाई झुटो सावित गराउन पुरै गाउँ उल्टियो
February 11, 2021 729
काठमाडौ । श्रीमानसंग सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण त ना व मा आएर झुटो कुरा बोल्दा इलाममा एक महिलाको घर विग्रिएको छ । तेस्रो सन्तान पनि छोरी जन्मिएपछि श्रीमानसंग उनको सम्बन्ध राम्रो भएन । २०६७ साल देखि नै उनीसंग श्रीमान टाढा हुन थाले ।
विदेशमा पैसा कमाउन गएका श्रीमानले पैसा पनि पठाएनन् । तीन छोरी र आफ्नो पेट पाल्ने खर्च त थिएन त्यस माथि तीन सन्तानलाई पढाउनु पर्ने जिम्मेवारी आमाकै काँधमा थियो ।
श्रीमान आफै पनि एक वर्ष देखि पैसा पठाउन नसकेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा एक महिलाको मानसिकता के हुन्छ होला ? यस्तो अवस्थामा महिलाले त ना व मा आएर आफुले अर्कैको ग र्भ फा ले भन्दै जेठानीलाई भनेको कुराले अहिले उनी घर न घाटकी बनाइएकी छन् ।
जेठानीसंग करिब एक घण्टा लामो कुरा भएको थियो । त्यो बीचमा उनले निकै दुखसुखका कुरा गरेकी थिइन् । तर जेठानीले त्यही कुरा मात्र भिडियो रेकर्ड गरेर विदेशमा भएका देवरलाई पठाइदिइन् ।
अहिले विदेशवाट श्रीमान आएर को संग सम्बन्ध थियो ? भन्दै गाउँले भेला पारेर महिलालाई र्याख र्याख्ती पारेका छन् । उनले आफुले त्यती बेला झुटो बोलेको भनेर बारम्बार भन्दा पनि उनको कुरा सुनिदिने कोही छैन ।
पहिला भनेकै कुरा सहि थियो भन्ने कुरा प्रमाणीत गराउन सबै लागेको देखिन्छ । सामान्यतया ६ महिनाको गर्भ त्यसै खेर जाँदैन । खेर गएपनि महिलाको स्वास्थ्य अवस्था विग्रन्छ । तर त्यो कुराको खोजीतिर कोही लागेको देखिदैन । गाउँले नै सबै महिलालाई नै गलत सावित गर्न खोजेको भिडियोवाट बुझ्न सकिन्छ ।
Prevलाईभ कार्यकर्ममै भाषण गर्दागर्दै नारायणकाजीले धमला जी चुप लाग्नुस भन्दै थर्काएपछी…
Nextधिरेन्द्र शाहकी कान्छी छोरी यसरी प्रेमीसँग रोमान्स गर्दै ( हेर्नुस फोटो फिचर )
सडक खन्ने क्रममा डोजर पल्टिँदा एक जनाको ज्या;न गयो
नानिको उपचारको लागि अझै पुगेन ८ करोड ६० लाख कृपया सक्दो शेर गरि नानिको ज्यान बचाउनुहोस
अब ओली प्रचण्ड होइन रबि दाई प्रधामन्त्री बनुपर्छ ! हामी चुनाब जिताउछौ, राजनीतिमा आउनुस
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (127107)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64554)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (42353)